Iindaba - Ukubamba iimpahla, ukunyuka kwamaxabiso, kunye neeodolo zicwangciselwe isiqingatha sokuqala sonyaka olandelayo! Umthamo wesiseko se-intshi esisi-8 uzele
Ukubamba iimpahla, ukunyuka kwamaxabiso, kunye neeodolo zicwangciselwe isiqingatha sokuqala sonyaka olandelayo! Umthamo wesiseko se-intshi esisi-8 uzele
Ngenxa yokukhula ngokukhawuleza kwemfuno yesicelo se-CIS yomenzi woluvo, ulawulo lwe-chip ye-PMIC, i-chip yesazisi yeminwe, i-chip ye-Bluetooth, i-chip ekhethekileyo yememori, njl njl.
Ngokwe-Securities Times, ngokusungulwa ngokuthe ngcembe kweefowuni eziphathwayo ze-5G, ibango lokusekwa kweendawo eziphambili ze-chip ziyaqhubeka ukubila. Iinkampani ezisisiseko ezifana ne-TSMC, i-Samsung, i-GF, i-UMC, kunye ne-SMIC zinamandla apheleleyo kwaye ziye zaba yintengiso yomthengisi.
Isamsung ithathela ingqalelo utyalomali oluzenzekelayo kumgca wemveliso ye-intshi ezi-8, ukusuka kwezothutho olwenziwayo ukuya kwezothutho lomatshini, kwaye kulindeleke ukuba ichithe ngaphezulu kwe-100 yezigidigidi zeedola zaseMelika.
Ngokwengxelo yeSecurities Times, ngenxa yokunqongophala kwamandla emveliso yokusekwa, abanye abavelisi be-IC baveze ukuba banyuse ixabiso lamafilimu amatsha kungekudala kwaye bazisa abathengi ukonyusa amaxabiso eziseko kwikota yesine yale unyaka nonyaka ozayo.
Ngokwezibalo zoKhuseleko loMsunguli, ukusukela ngoSeptemba, amandla okufumana isiseko se-intshi esi-8 ebesomelele, kwaye ixesha lokuhanjiswa kwesiseko liye landiswa ngokuqhubekayo ukuya kwiinyanga ezi-3 okanye nangaphezulu kwesiqingatha sonyaka. Kulindeleke ukuba ixabiso lokufumana ii-odolo ezintsha kwikota yesine lonyuswe. Iya kunyuka nge-10%.
Ngokwimithombo yemizi-mveliso, uShenzhen De Ruipu ukhokele ekukhokeleni isaziso sokunyusa amaxabiso ngeemveliso ngoSeptemba 18, esazisa ukuba inkampani ithathe isigqibo sokuhlengahlengisa amaxabiso emveliso ngokufanelekileyo ukusuka nge-1 ka-Okthobha ka-2020. I-8205 yayo iyakusekelwa kwixabiso lokuqala . Yonyusa nge-0.02 yuan.
Omnye umenzi weetyhubhu ze-MOS, uShenzhen Jinyu Semiconductor, naye wathumela ileta yokuqhagamshelana nabathengi ngokunyuka kwamaxabiso. Ukusukela nge-1 ka-Okthobha i-2020, ixabiso leThubhu yeMOS kunye neemveliso zoluhlu ze-IC ziya kulungelelaniswa ngokufanelekileyo nge-20% -30%.
Abanye abahlalutyi bathi imeko yangoku yokuqhuba-kwicala lokuqhuba lobungakanani bemveliso ye-intshi ye-8 intshi kukunyuka okuqhubekayo kwemfuno yeetshipsi ze-analog kunye nezixhobo zamandla, ngelixa izinga lokukhula kokubonelela lisalela emva kwenqanaba lokukhula kwemfuno, elenza abenzi abakhulu sebenzisa ngokukhawuleza isiseko.
Ukhuseleko lwezoShishino luye lwathi ukunqongophala kweetshipsi ngoku kubangelwa kukuphazamiseka kwenkqubo yokunikezela. Ezinye iimveliso zeefowuni eziphathwayo ziye zonyusa ukuthengwa kwe-chip kwezi nyanga zintathu zidlulileyo zokuqinisekisa ukhuseleko lwentengiso Ngenxa yoko, uluhlu lwezinto ezikhoyo zeshishini kwinqanaba elisezantsi kakhulu.
Kwangelo xesha, iXiaomi, i-OPPO kunye nezinye iimveliso zijonge phambili kutshintsho olukhulu kwisabelo sefowuni esiphathwayo kunyaka olandelayo. Banethemba ngakumbi malunga nokwanda kwezabelo kunyaka olandelayo. Bonyusa nenjongo yokugcina impahla. Akukhutshelwa ngaphandle ukuba kukho imeko egqithisileyo. Ke ngoko, iZokhuseleko kuShishino lilindele ukuba ukusilela kuya kuqhubeka kude kube sisiqingatha sokuqala sonyaka olandelayo. .